Hiob 22 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Elifas asɛm a ɛto so abiɛsa (1-30)
‘Onipa so betumi aba mfaso ama Onyankopɔn anaa?’ (2, 3)
Ɔbɔɔ Hiob sobo sɛ ɔyɛ odifudepɛfo a osisi nkurɔfo (6-9)
‘San bra Onyankopɔn nkyɛn, na wobɛsan asi wo dedaw mu’ (23)
22 Ɛnna Elifas+ a ofi Teman no kae sɛ: 2 “Ɔbarima so wɔ mfaso ma Onyankopɔn anaa? Na obi a ɔwɔ nhumu so wɔ mfaso ma no anaa?+ 3 Sɛ woyɛ ɔtreneeni a, ade nyinaa so Tumfo no de, ɛfa ne ho bɛn?*Na wokɔ so ma w’abrabɔ di mu a, mfaso bɛn na obenya?+ 4 Wo nyamesuro nti, obedi w’asɛmNa watwe w’aso anaa? 5 Esiane sɛ w’amumɔyɛ dɔɔsoNa woda so ara yɛ bɔne* nti na aba saa. Meboa?+ 6 Wugye awowa fi wo nuanom nkyɛn bere a ɛnsɛ sɛ wugye,Na wuyi nkurɔfo ho ntama ma wɔda adagyaw.*+ 7 Womma nea wabrɛ nsu nnom,Na nea ɔkɔm de no nso, womma no aduan.+ 8 Ɔbarima a ne ho yɛ den na asaase no yɛ ne dea,+Na nea ɔwɔ anuonyam na ɔte so. 9 Nanso womaa akunafo de nsapan kɔe,Na nnyanka nso, wububuu wɔn nsam. 10 Ɛno nti na mfiri* atwa wo ho ahyia,+Na nneɛma a ɛyɛ hu a ɛba mpofirim hunahuna wo no. 11 Ɛno nti na esum kabii aba a wuntumi nhu ade no.Na ɛno nso nti na nsu ayiri akata wo so no. 12 Ɛnyɛ ɔsorosoro na Onyankopɔn wɔ anaa? Na hwɛ sɛnea nsoromma nyinaa wɔ soro tɔnn. 13 Nanso woka sɛ: ‘Ɛdɛn koraa na Onyankopɔn nim? Obetumi ahu nea ɛwɔ sum kabii mu abu atɛn anaa? 14 Sɛ ɔnenam ɔsoro a akɔntɔn* no so a,Omununkum a asiw n’anim nti, onhu ade.’ 15 Wobɛfa tete kwan aNnipabɔnefo faa so no so anaa? 16 Wɔn na wohwim wɔn kɔe* ansa na wɔn bere reso;Wɔn na nsuyiri* hohoroo wɔn fapem kɔe.+ 17 Wɔka kyerɛɛ nokware Nyankopɔn no sɛ: ‘Gyaa yɛn!’ Na wɔkae sɛ, ‘Ɛdɛn na ade nyinaa so Tumfo no betumi ayɛ yɛn?’ 18 Nanso Ɔno na ɔde nneɛma pa ahyɛ wɔn afi ma. (Me de, adwemmɔne a ɛte saa nni me tirim koraa.) 19 Atreneefo behu eyi na wɔadi ahurusi,Na wɔn a wɔn ho nni asɛm bedi wɔn ho fɛw sɛ: 20 ‘Wɔasɛe yɛn atamfo,Na wɔn ho biribiara a aka nso, ogya bɛhyew.’ 21 Hu No* yiye, na w’asom bedwo wo;Ɛno bɛma woanya nneɛma pa. 22 Gye n’anom mmara tom,Na fa ne nsɛm sie wo koma mu.+ 23 Sɛ wosan ba ade nyinaa so Tumfo no nkyɛn a, wobɛsan asi wo dedaw mu;+Sɛ wuyi nea ɛnteɛ fi wo ntamadan mu, 24 Sɛ wotow wo sika kɔkɔɔ* gu mfuturu mu,Na wotow Ofir sika kɔkɔɔ+ no gu subon* mu a, 25 Anka ade nyinaa so Tumfo no bɛba abɛyɛ wo sika kɔkɔɔ,*Na ɔno ara nso abɛyɛ wo dwetɛ amapa. 26 Anka ade nyinaa so Tumfo no nti, w’ani begye,Na woama w’ani so akyerɛ Onyankopɔn. 27 Wobɛsrɛ no, na obetie wo,Na bɔ a woahyɛ no, wubetua. 28 Nea woabɔ wo tirim sɛ wobɛyɛ biara bɛyɛ yiye,Na hann bɛhyerɛn wɔ wo kwan so. 29 Na sɛ wokasa ahantan so a, ɔbɛbrɛ wo ase,Na ɔhobrɛasefo* de, obegye no. 30 Obegye wɔn a wɔn ho nni asɛm;Enti sɛ wo nsa ho tew a, sɛnea ɛte biara obegye wo.”
^ Anaa “ɛma ade nyinaa so Tumfo no ani gye anaa.”
^ Anaa “wo bɔne nni awiei.”
^ Nt., “wuyi wɔn a wɔda adagyaw ho ntama.”
^ Nt., “nnomaa mfiri.”
^ Anaa “ɔsoro kontonkron.”
^ Anaa “Wɔn na wotwaa wɔn nkwa so.”
^ Nt., “asubɔnten.”
^ Anaa “Onyankopɔn.”
^ Anaa “sika kɔkɔɔ mpɔkowa.”
^ Anaa “obon a ɛda abotan mu.”
^ Anaa “nea n’ani deda fam.”